Sagaing or the Region which Faces Burning Most - Issue 55 » Myanmar Peace Monitor
Sagaing or the Region which Faces Burning Most – Issue 55
Till April 30th, 2022, the total number of the houses burned down by the military council troops has reached 11,417. The number of burned houses continues to rise as the military council troops are consecutively committing arson attacks during this month.
According to the report by Data for Myanmar, the upper Myanmar like Sagaing, Magway and Mandalay account for 85 per cent of arsons. Arson is also reported in Chin, Karenni (Kayah), Shan (South), Tanintharyi, Bago, Kayin and Kachin. So, the military council troops are carrying out targeted arson attacks on the regions which see strong armed resistances.
Sagaing or the Region which Faces Burning Most - Issue 55 (18 - 24 May 2022) ENG
၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက်အထိ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်များ၏ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည့် အရပ်သားပြည်သူပိုင် နေအိမ်ပေါင်း ၁၁၄၁၇ လုံး ရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခု မေလအတွင်းတွင်လည်း အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်များအနေဖြင့် ကျေးရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများကို ဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်သည့်အတွက် အထက်ပါကိန်းဂဏန်းများသည် ဆက်လက်မြင့်တက်လာနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
Data for Myanmar ၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရမှုများ၏ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် စစ်ကိုင်း၊ မကွေးနှင့် မန္တလေး စသည့် အညာဒေသအတွင်း ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုမှ ချင်း၊ ကရင်နီ (ကယား)၊ ရှမ်း (တောင်)၊ တနသ်ာရီ၊ ပဲခူး၊ ကရင်နှင့် ကချင်ဒေသများ ပါဝင်နေသည်။ ထို့ကြောင့် အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်များ၏ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းသည် ၎င်းတို့အား ခုခံတော်လှန်စစ်ပြင်းထန်စွာ ဆင်နွှဲနေသော အရပ်ဒေသများကို ပစ်မှတ်ထားလုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
Sagaing or the Region which Faces Burning Most - Issue 55 (18 - 24 May 2022) MMR